कामीकी छोरी हुँ भन्दा पहिला हुन्छ भनेकी घरबेटीले कोठा दिन मानिनन् - टि. एल. एन पोस्ट
Home Uncategorized कामीकी छोरी हुँ भन्दा पहिला हुन्छ भनेकी घरबेटीले कोठा दिन मानिनन्
कामीकी छोरी हुँ भन्दा पहिला हुन्छ भनेकी घरबेटीले कोठा दिन मानिनन्
तनहुँमा स्थायी बसोबास गर्ने २४ वर्षीया रूपा सुनारले हिजो दिउँसो फेसबुकमा एउटा भिडियो पोस्ट गरिन। काठमाडौंको बबरमहलमा आमासँग बस्दै आएकी रुपा आफु कामी भएकै कारण पाईसकेको कोठा नपाईएको भन्दै आफुले भोगेको घटनाबारे फेसबुकमा भिडिओ पोष्ट गरिन्।
पछिल्लो समय उनी इमेज टेलिभिजनको उकाली-ओराली कार्यक्रमकी प्रस्तोताको रुपमा काम गर्दै आईरहेकी छन्। कोरोनाभाइरसको महामारी रोक्न निषेधाज्ञा गरियो। रूपा पनि अरू काम घरबाटै गर्थिन्। कार्यक्रम चलाउन केही समय कार्यालय जान्थिन्।आमा-छोरीलाई एउटामात्रै कोठा साँघुरो भएको थियो। त्यही भएर उनी सर्नका लागि कोठा खोजिरहेकी थिइन्। कतै कोठा भेटिए आफूलाई जानकारी दिन साथीहरूलाई भनेकी थिइन्।
कतै कोठा भेटिए आफूलाई जानकारी दिन साथीहरूलाई भनेकी रूपालाई मंगलबार दिउँसो उनकी एकजना साथीले बबरमहलमै कोठा छ हेर्न जाउँ भनिन र उनीहरू तीन जना भएर कोठा हेर्न गए। कोठा हेरेपछि रूपालाई मन पर्‍यो।घरबेटीसँग भाडाको कुरा भयो। कुरा मिल्यो। घरबेटीले कोठामा बस्दा राम्रोसँग बस्नु पर्ने बताइन्।
घरबेटीले हल्ला गर्ने, अबेला आउने, मान्छेहरू धेरै ल्याउनेजस्ता काम गर्न पाइन्न भनिन र रूपाले पनि हामी पढ्ने मान्छे त्यस्तो गर्दैनौ भनिन। घरबेटीले आफ्नै छोरीहरूजस्तो लाग्यो मलाई, एउटै घरको मान्छे जस्तो भएर बस्नुपर्छ। बसेपछि भाडामा बस्नेलाई पनि हामीले हेप्नु हुँदैन, भाडामा बस्नेले पनि अरूको घर सम्झेर बस्नुहुँदैन। सबै जना मिलेर बस्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि भयो।
रूपाले आमालाई पनि एकपल्ट कोठा देखाउन ल्याउने बताइन्।त्यत्तिकैमा घरबेटीले थरको कुरा उठाइन्। उनले म कामीको छोरी हुँ भनिन्।उनको थर सुनेर घरबेटीले केही बोलिनन्। केहीबेर अघिसम्म मिलेर बस्नुपर्ने भनेकी उनी अकमकिइन्। रूपा र उनकी साथीहरू पनि केही बोल्न सकेनन्।त्यसपछि घरबेटीले अनकनाएर भनिन्, ‘तपाईंको नम्बर दिनू न, म तपाईंलाई पछि खबर गर्छु।’घरबेटीको कुरा सुनेर रूपाको चित्त दुखिसकेको थियो। तर उनले केही नभएजस्तो गरिन्।साथीसँगै उनी कोठामा फर्किइन्।
घरबेटीले केहीबेरपछि उनकी साथीलाई फोन गरेर कोठा नदिने कुरा सुनाइन्। उनीहरु फर्किएको केहीबेरपछि उहाँले साथीलाई फोन गरेर यस्तो-यस्तो मान्छे पो ल्याउनुभएछ है, मलाई त थाहा भएन। बस्न मिल्दैन भनेर भन्नुभएछ,’ उनले भिडिओ मा भनेकी छन्।
त्यसपछि रूपालाई यो कुरा आफूमा मात्र सीमित राख्न र चित्त दु:खाएर दबाइरहन मन नलागेर आफ्नो सामाजिक संजालमा भिडियो पोष्ट गरिन।
Previous article६ देशमा सातामा २ हजार भन्दा बढी यात्रु नहुने गरी उडान खोल्ने सीसीएमसीको निर्णय
Next articleमेलम्चीका बाढी प्रभावितलाई सहयोग वितरण गर्दै पूजा र श्वेता